Maqaallada Pavel Obod ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Pavel Obod
Pavel Obod waa ganacsade, aasaasaha Studio Sloboda, iyo maalgeliyaha guryaha. Waxa uu jecel yahay in uu la xidho ganacsatada waxana uu bilaabay naadiyo badan oo ganacsi oo loogu talagalay maamulayaasha, iibka, iyo maareeyayaasha mashaariicda ee Ukraine iyo Belarus.
Isbeddellada MarTech ee Wadista Isbeddelka Dijital ah
Jimco, Oktoobar 22, 2021 Jimco, Oktoobar 22, 2021 Pavel Obod
Qaar badan oo ku takhasusay suuqgeyntu way ogyihiin: tobankii sano ee la soo dhaafay, tignoolajiyada suuqgeynta (Martech) ayaa ku qarxay koritaanka. Habkan koritaanku ma hoos u dhacayo. Dhab ahaantii, daraasaddii ugu dambeysay ee 2020 waxay muujineysaa inay jiraan in ka badan 8000 oo qalab tignoolajiyada suuq-geynta suuqa. Badi suuqleydu waxay isticmaalaan in ka badan shan qalab maalin la siiyay, iyo in ka badan 20 guud ahaan fulinta xeeladahooda suuqgeyneed. Goobaha Martech waxay caawiyaan ganacsigaaga labadaba dib u soo celinta maalgashiga iyo caawinta